Ìhè Mmiri Ledanụ 75 Watt 80Watt 4000K China Manufacturer
Nkọwa:Ihu Igwe Ibe Mmiri Late 75 Watt,Ìhè Ìhè nke Ọdụdọ 4000k,Ìhè Ìhè nke 80w
Home > Ngwaahịa > Iju Mmiri Iju Mmiri > Mmiri Iju Mmiri 100 Lt n&#39;èzí > Ìhè Mmiri Ledanụ 75 Watt 80Watt 4000K
Ihe Nlereanya.: BB-FL-80w-D
Ìhè Ìhè nke 80w 80w anyị nwere ike ịmịpụta ọmarịcha 9600lm. Nke a Ugwu Ihu Iri Late 75 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe Ọdụdọ 4000k a nke nwere nkwụ ọtọ , nke kwụsiri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya, can nwere ike iwunye ihe nkuku ịchọrọ. Site na ntule IP66, ọkụ ọgbụgba ọkụ cob na-eduga nwere ike iji ọtụtụ ebe na ọrụ ọkụ na n'èzí. Nke a buturu iju mmiri 12v zuru oke maka ubi, ụlọ mmepụta ihe, docks, yad, n'ámá egwuregwu, ama egwuregwu na ebe ndị ọzọ ebe achọrọ ọkụ.
Ngwaahịa : Iju Mmiri Iju Mmiri > Mmiri Iju Mmiri 100 Lt n'èzí
100W Mmiri nke Mmiri na-ekpuchi Kpọtụrụ ugbu a
80W N'elu nchekwa Backyard Iju Mmiri ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
100W Ọhụụ Na-apụta n'Ọdọ Mmiri Iju Mmiri Ngwunye Kpọtụrụ ugbu a
Edobere ọkụ Ighalo Nke Udiri 100W 13000LM Kpọtụrụ ugbu a
ETL Portable Light Flood Light for Backyard 150W Kpọtụrụ ugbu a
200W Light Light Light Led na Sensor 24000LM Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè 70W Maka 84lọ 8400lm 5000k Kpọtụrụ ugbu a
100W Ìhè Ìhè nke Igwe Ọdọ 100000lm 4000k Kpọtụrụ ugbu a
Ihu Igwe Ibe Mmiri Late 75 Watt Ìhè Ìhè nke Ọdụdọ 4000k Ìhè Ìhè nke 80w Iju Mmiri 500 Watts Ejiri Ike Mmiri 150 Watt Igwe Igwe Mmiri Na-acha Ncha 30W IOT Igwe Mmiri Nlekwa Anya 25W Mmiri Iju Mmiri 500 Watt